Waa maxay qaliinka refractive | Bezzia
Tony Torres | 13/05/2022 14:00 | Tilmaamaha caafimaadka, Cudurada
Muddo sannado ah, dadka qaba dhibaatooyinka aragga waxay awoodeen inay adeegsadaan qalliinka refractive si loo saxo oo loo baabi'iyo muraayadaha ama muraayadaha indhaha weligood. Qalliinka dib-u-celinta wuxuu ka kooban yahay koox ka mid ah waxqabadyada ama farsamooyinka qalliinka kuwaas oo dhibaatooyinka qaarkood ee keena isbeddelka aragga lagu saxo ama la tirtiro. Tusaale ahaan, myopia, astigmatism, hyperopia iyo xitaa maanta presbyopia sidoo kale waa la sixi karaa.
Caawin buuxda oo loogu talagalay dadka doonaya, raba ama u baahan inay joojiyaan xidhashada muraayadaha, ha ahaato mid xirfad leh, ciyaaraha ama sababo qurxoon awgeed. Sababtoo ah muraayaduhu waa qalab aad u fiican, madadaalo leh oo xitaa ku daraya shakhsiyadda wejiga, laakiin dhammaanteena waa in ay xirtaan maalin kasta, ma aha wax aan ka badnayn xusuusin in iyaga la'aanteed, aan luminay.
1 qalliinka refractive
1.1 Qalliinka refractive laser, LASIK ama PKR
1.2 Waxa kale oo la isticmaali karaa muraayada indhaha
1.3 Sideen ku ogaan karaa in la igu qali karo?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo qalliinka refractive ah si loo saxo dhibaatooyinka aragga. Xaalad kasta, waxay noqon doontaa khabiirka takhasuska leh kaas oo go'aaminaya midka ugu habboon iyo xitaa in ka badan hal farsamo ayaa lagu dabaqi karaa waqti isku mid ah isla qof isku mid ah. Marka xigta waxaan kuu sheegaynaa waa maxay noocyada qalliinka refractive, marka la isticmaalo iyo sida farsamada loo sameeyo.
Qalliinka refractive laser, LASIK ama PKR
Marka laysarka loo isticmaalo in lagu saxo isbeddelka isha ee sababa dhibaatooyinka aragga, waxa ay ku saabsan tahay in la beddelo qaabka cornea si loo saxo diopter-yada ka hortagga aragga saxda ah. Qaabku wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xidhan qalin jebinta Bukaan kasta, tusaale ahaan, marka la isticmaalayo farsamada LASIK, waxqabadyada soo socda ayaa la sameeyaa.
Si loo saxo myopia: waxa la sameeyo waa in la simo qallooca laysarka, markaa nalka ayaa si sax ah diiradda u saaray kornea.
Marka laga hadlayo hyperopia: Xaaladdan oo kale, cidhifyada cornea ayaa la qaabeeyey si ay u abuuraan qalooc.
astigmatism, waxa la sameeyo waa in la simo aagga leh qalooca ugu weyn ee cornea si looga tago lebbiska sida ugu macquulsan.
Marka laga hadlayo waxa loogu yeero qalliinka dib-u-celinta PKR, farsamada way la mid tahay laakiin inta badan aad ayay uga cadhaysiiyaan bukaanka. Waxay ahayd farsamadii ugu horeysay ee loo isticmaalo in lagu saxo dhibaatooyinka aragga, sidaas awgeed maanta si weyn ayaa loo hagaajiyay oo sidaas awgeed marar badan looma isticmaalo.
Waxa kale oo la isticmaali karaa muraayada indhaha
Xaaladaha qaarkood, halkii laga isticmaali lahaa laysarka si loo beddelo cornea oo loo hagaajiyo aragga, muraayadda ayaa lagu dhejin karaa ama muraayadda ayaa laga saari karaa, taas oo ku xidhan baahida bukaan kasta. Tani waa farsamada inta badan la isticmaalo marka Bukaanku wuxuu leeyahay diopters ka badan inta la oggol yahay si loo sameeyo qalliin laysarka refractive. Marka laga hadlayo galinta muraayadda, muraayadda waa la ilaaliyaa. Xaalado kale, muraayada ayaa la saaraa waxaana lagu dhejiyaa muraayad aphakic ah, taas oo ah farsamada loo isticmaalo in lagu saaro indhaha indhaha.
Sideen ku ogaan karaa in la igu qali karo?
Si loo sameeyo qalliinka dib-u-celinta haddii loo baahdo in la saxo cilladaha aragga, sida myopia, astigmatism ama hyperopia, Bukaanku waa inuu buuxiyaa cabbirro gaar ah. Dhinaca kale, qalin-jabinta waa inay ahaataa mid deggan ugu yaraan laba sano. Halbeegyada kale ee badbaadada ee ay tahay in uu khabiirku ku qiimeeyo kiis kasta sidoo kale waa la qiimeeyaa.
Sida ugu wanaagsan ee aad ku xallin karto dhammaan shakiyadaada waa inaad la tashato khabiir ku takhasusay kaasoo dib u eegis ku samayn kara oo sharxi kara fursadahaaga. Maadaama ay jiraan xuduudo badan oo lagu qiimeeyo kiis kasta, baahida bukaan kasta iyo suurtogalnimada helitaanka natiijada la rabo ayaa sidoo kale ku kala duwanaan karta xaalad kasta. Ka sokow, In kasta oo uu yahay qalliin aad badbaado u leh, haddana ma aha waxyeellooyin aan waxyeello lahayn. taas oo ay tahay in sidoo kale la qiimeeyo. Had iyo jeer naftaada geli gacmo wanaagsan, xalli dhammaan shakiyada. Ka tag wakhti aad dib u milicsato oo go'aanso goorta, sida iyo cidda aad rabto in lagugu sameeyo qaliin si loo baabi'iyo dhibaatooyinka aragga weligeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Cudurada » Waa maxay qaliinka refractive?